Fotoam-bavaka alohan'ny hatory ho an'ny ankizy | TOKO VAVAKA
Home vavaka Fotoam-bavaka alohan'ny hatory ho an'ny ankizy
Androany isika dia hiatrika vavaka amin'ny torimaso ho an'ny ankizy. Ny ray aman-dreny dia tsy maintsy mampiditra ny zanany amin'ny fotoam-bavaka alohan'ny hatoriany. Noho ny toetoetran'ireo ankizy dia mety tsy tadidiny na tsy asian'izy ireo lanja amin'ny vavaka alohan'ny hatory. Ny ataon'ny ray aman-dreny dia ny miantoka ny fahazaran'izy ireo izany.
Ny vavaka alohan'ny hatory ho an'ny ankizy dia afaka miova endrika na lamina samihafa. Mety ho fiarovana amin'ny fanahy tsy hita maso amin'ny misasakalina ny fananana zaza kely. Ary koa, mety ho lamina iray hampianarana ny zaza amin'ny lalan'ny Tompo izany ka rehefa lehibe izy ireo dia tsy hiala amin'izany. Ankizy maro no very ny anjarany noho ny fialan-tsasatry ny ray aman-dreniny amin'ny toerana fivavahana. Tsy nanao fahadisoana ny soratra masina rehefa nilaza fa tokony hivavaka tsy misy vanim-potoana ny Kristiana.
Nampahafantatra ny Baiboly fa tsy miala sasatra ny devoly. Mandehandeha tahaka ny biby noana mitady izay hohaniny. Ary ny mpangalatra dia tsy tonga mandritra ny andro izay mifoha mavitrika ny tompon-trano. Ho avy kosa ny mpangalatra amin'ny alina rehefa azony antoka fa natory ny tompon-trano - ny vavaka ataontsika ho toy ny rafitra fiarovana hiarovana antsika amin'ny faharatsian'ny devoly. Manome didy aho fa velona Andriamanitra ary velona ny fanahiny, ny fahavalo dia tsy hanana fahefana amin'ny zanakao amin'ny anaran'i Jesosy.
Antony lehibe iray hafa mahatonga antsika hampiditra ny ankizy amin'ny vavaka alohan'ny hatory ny fanatanterahana ny tenin'ny Tompo izay mampiofana ny zanakao amin'ny làlana tokony halehany, rehefa lehibe izy dia tsy hiala amin'izany. Rehefa mampiditra am-bavaka tsy tapaka ny zanatsika isika dia hanome azy ireo fahatsiarovan-tena fa ny vavaka dia ampahany lehibe amin'ny fisiany. Mivavaka aho mba tsy hananan'ny fahavalo fahefana amin'ny zanakao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy ratsy avy amin'ny devoly izay mitana ny ain'ny ankizy kely dia tsy hanakaiky ny zanakao amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy.
Manomboka izao dia manendry ny Serafima be voninahitra hiandraikitra ny zanakao aho; izy ireo dia hitarika sy hiaro azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Halalino sy ampiasao ity vavaka alohan'ny torimaso ity ho an'ny ankizy, ary azonao antoka fa hiaro ny ain'ny zanakao izany.
Tsy maintsy avelanao ny zanakao hamerina aorianao aorian'ny fotoam-bavaka. Ampianaro mivavaka izy ireo mba hahafahan'izy ireo mianatra mifampiresaka amin'Andriamanitra.
Ry Tompoko, misaotra anao aho noho ny fahombiazan'ny androko. Misaotra anao aho satria niaro ahy nandritra ny tontolo andro ianao. Ankasitrahako ianao, Jesosy Tompo, satria nijoro teo akaikiko isaky ny minitra isan'andro ianao, ary tsy namela ny ratsy hitranga. Misaotra anao aho, Jesosy Tompo, noho izany, hisandratra ny anaranao.
Ray any an-danitra, misaotra anao aho tamin'ny fiainan'ny ray aman-dreniko, misaotra anao aho satria nampianatra azy ireo hampianatra anay amin'ny lalanao ianao, mankasitraka anao aho satria tsy nandao azy ireo na dia fotoana iray aza ianao, misaotra anao aho satria tsy navelanao. loza hanjo azy ireo, asandratra amin'ny anaran'i Jesosy ny anaranao.
Ray Tompo ô, mivavaka aho mba hahazo famelana ny fahotana. Amin'ny lafiny rehetra izay anotako an-jaza taminao, amin'ny fomba rehetra nahavita heloka ary tsy fantatro, Tompoko, azafady mamela ny heloko. Noho ny fahafatesan'i Jesosy Kristy zanaka dia mangataka aminao aho ny hamelanao ny heloko. Ary mampanantena ny tsy hanao azy ireo intsony aho satria ny teninao milaza fa ny sorona ataon'ny Tompo dia fanahy torotoro sy fo torotoro sy mangorakoraka tsy hohamavoinao.
Jesosy Tompo ô, mivavaka aho mba handeha hatory anio alina, mivavaka aho mba ho tonga amiko ny tananao fiarovana. Miaro ny tenako amin'ny zana-tsipìka rehetra izay misidina alina aho. Fa hoy ny soratra masina: fanomezana avy amin'Andriamanitra ny ankizy. Satria nataonao fanomezana ho ahy ho an'ny ray aman-dreniko aho, Tompoko, azafady, aza avela ny fahavalo hangalatra ilay fanomezana amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, manohitra ny endrika nofinofy mampatahotra rehetra mety handoto ny alina aho. Ny nofinofin'ny demonia rehetra napetraky ny fahavalo mba hatory ahy mba hampitahorana ahy dia aringako amin'ny anaran'i Jesosy ireo nofy ireo. Hoy ny soratra masina Fa Andriamanitra tsy nanome antsika fanahin'ny tahotra fa ny maha-zanakalahy hiantsoantso Ahba Ray. Tompo ô, mitaraina aminao aho anio fa aringanao ny nofy ratsy rehetra tsy hatory anio alina amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo, fa izany, dia voasoratra fa ho famantarana sy fahagagana ary koa ny soratra masina hahatakatra fa mitondra ny marik'i Kristy aho mba tsy hisy hanaitaitra ahy. Tonga amin'ny herinao aho hamely ny fanafihana rehetra ataon'ny fahavalo. Mivavaka aho mba hamongoranao ny fanafihan'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo ô, satria hiditra amin'ny andro vaovao rahampitso aho, dia manamasina ny rahampitso amin'ny rànanao. Mivavaka aho fa ny ratsy rehetra enta-mavesatra dia ny ran'i Jesosy no manafoana rahampitso. Fa voasoratra fa ny naharesy azy dia noho ny amin'ny ran'ny zanak'ondry sy ny tenin'ny tenivavolombelona. Manome didy amin'ny anaran'i Jesosy aho fa handringana ny ratsy rehetra rahampitso amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo ô, atolotro eo an-tananao ny fianarako. Mivavaka aho mba homenao ahy ny fahasoavana hanan-tombo tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Ary manapa-kevitra amin'ny ho avy aho fa ho lehibe amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amin'ny torimasako anio alina dia tiako ny ahalalanao zavatra lalina amiko momba ahy. Manome didy aho fa ny lanitra misy ny fanambarana dia hisokatra ho ahy amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny rahampitso maraina, avelao aho hanana vavony hankalazana ny anaranao, ao amin'i Jesosy no ivavahako.
Previous lahatsoratraVavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
Next lahatsoratraVavaka ho an'ny fahagagana dieny izao